BUKELA: I-trailer ye-Netflix 'Yokoyikwa kweTrato yesitalato' ibeka iTerror Front kunye neziko
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	BUKELA: I-trailer ye-Netflix 'Yokoyikwa kweTrato yesitalato' ibeka iTerror Front kunye neZiko
by Waylon Jordan Juni 9, 2021 2,203 imbono
Sinenyanga engaphantsi kwenyanga de Netflix Isitrato soyika Trilogy debuts, kunye neqonga lokusasaza lahla itreyila entsha namhlanje ukusinika ubunzulu bokubona izinto ezothusayo abazigcinileyo!
I-trilogy yefilimu iya kukhupha enye ngeveki eqala nge-2 kaJulayi 2021 kwaye iya kuqhubeka 1994, 1978, no-1666. Amagqabantshintshi eefilimu afundeka ngolu hlobo:
Ngo-1994, iqela lolutsha lifumanisa ukuba iziganeko ezoyikisayo eziye zangcungcuthekisa iidolophu zazo kwizizukulwana ngezizukulwana zinokudityaniswa- kwaye zibe zezona njongo zilandelayo. Ngokusekwe kwi-RL Stine yeyona nto ithengiswayo ye-horror series, Isitrato soyiko silandela amaphupha amabi ngembali kaShadyside eyingozi.
The Isitrato soyika Iincwadi zaqala ukupapashwa ngo-1989. Yayiyinto ebalaseleyo yeRL Stine, bekulindelwe ukuba abaphulaphuli bakhe bayakhula kwaye bafuna iincwadi ezikhula nabo. Izibonda zaziphezulu kwezi ncwadi, kwaye nangona babeswelekile abambalwa Goosebumps iincwadi, oko wakubonisa Isitrato soyika yayinkulu ngakumbi.
Olu luhlu luthengise ngaphezulu kwe-80 yezigidi zeekopi kwihlabathi liphela ukuza kuthi ga ngoku kwaye zihlala zikho, kubalandeli aboyikisayo, isango labo kuhlobo olo.
Ikharavani entsha ngokuqinisekileyo inamandla, ibonisa ibali elixhuma ngexesha kunye neziphumo ezoyikisayo. Jonga apha ngezantsi, kwaye usazise ukuba uza kujonga na Isitrato soyika xa iqala kwi-Netflix ngoJulayi 9, 2021!